Helio G70 သုံးထားမယ့် Redmi9ဖုန်း 2020 မှာထွက်လာမည် | Net Guide
Home News International News Helio G70 သုံးထားမယ့် Redmi9ဖုန်း 2020 မှာထွက်လာမည်
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက Xiaomi India အနေနဲ့ Redmi 8A ဖုန်းကို ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာမှာ ထွက်လာတဲ့ Redmi 8 ဖုန်းကတော့ ပိုကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ပါ။91mobiles ကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ တရုတ်စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ Redmi9ဖုန်းကို 2020 အစောပိုင်းမှာ ဈေးကွက်တင်လာအုံးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ india ဈေးကွက်ကိုသာ အစောဆုံး ရောက်ရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထွက်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
Redmi9စမတ်ဖုန်းဟာ notch display နဲ့ဖြစ်ပြီး 6.6 inches. မြင်ကွင်းကျယ် ဖုန်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ယခင်မျိုးဆက်ဖုန်းကတော့ 6.22-inch display သာသုံးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပရိုဆက်ဆာအတွက် ဒီဖုန်းမှာ MediaTek Helio G70 chipset ကိုသုံးလာမယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ကြိုသိနေရပါတယ်။ Helio G90 နဲ့ Helio G90T processors တွေထက် အနိမ့်လို့ဆိုရမှာပါ။
4 GB RAM မှာ 64 GB သိုလှောင်မှု ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီး အခြားမူကွဲတွေလည်း ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Redmi9ဖုန်းကို တရုတ်မှာလာမယ့် ပထမ ၃လပတ်အတွင်းမှာ ရောင်းချပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားမျော်လင့် စရာကောင်းတာကတော့ ယခင်ထွက်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှု အပိုင်းမှာ ပိုသာနိုင်တာမျိုးပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အချက်အလက်က ဒီလောက်သာ သိထားပါသေးတယ်။
Helio G70 သုံးထားမယ့္ Redmi9ဖုန္း 2020 မွာထြက္လာမည္
ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက Xiaomi India အေနနဲ႔ Redmi 8A ဖုန္းကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာမွာ ထြက္လာတဲ့ Redmi 8 ဖုန္းကေတာ့ ပိုေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပါ။91mobiles ကလာတဲ့ သတင္းေတြအရ တရုတ္စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူအေနနဲ႔ Redmi9ဖုန္းကို 2020 အေစာပိုင္းမွာ ေစ်းကြက္တင္လာအုံးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ india ေစ်းကြက္ကိုသာ အေစာဆုံး ေရာက္ရွိမွာပါ။ အဲ့ဒီဖုန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ထြက္ထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
Redmi9စမတ္ဖုန္းဟာ notch display နဲ႔ျဖစ္ၿပီး 6.6 inches. ျမင္ကြင္းက်ယ္ ဖုန္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ယခင္မ်ိဳးဆက္ဖုန္းကေတာ့ 6.22-inch display သာသုံးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပရိုဆက္ဆာအတြက္ ဒီဖုန္းမွာ MediaTek Helio G70 chipset ကိုသုံးလာမယ္လို႔လည္း သတင္းေတြ ႀကိဳသိေနရပါတယ္။ Helio G90 နဲ႔ Helio G90T processors ေတြထက္ အနိမ့္လို႔ဆိုရမွာပါ။
4 GB RAM မွာ 64 GB သိုေလွာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အျခားမူကြဲေတြလည္း ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Redmi9ဖုန္းကို တရုတ္မွာလာမယ့္ ပထမ ၃လပတ္အတြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အျခားေမ်ာ္လင့္ စရာေကာင္းတာကေတာ့ ယခင္ထြက္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးမႈ အပိုင္းမွာ ပိုသာႏုိင္တာမ်ဳိးပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္္မွာေတာ့ အခ်က္အလက္က ဒီေလာက္သာ သိထားပါေသးတယ္။
Previous articleစိတ်ဖိစီးမှုမြင့်မားလာမှုကြောင့် YouTube တွင် ဗီဒီယိုတင်မှုမှ ခေတ္တနားမယ့် PewDiePie
Next articleReno3 ဖုန်းရဲ့ live photos တွေထပ်မံထွက်ရှိလာ
Snapdragon 765G သုံးထားတဲ့ ZTE Blade X1 5G ကို ကြေညာ
ZTE Axon 20 5G ကို အရောင်လေးရောင်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်မည်